NGUBANI OHLAWULELA IBACHELORETTE KUNYE NEBACHELOR PARTY? NANTSI IMPENDULO - IMISITHO YAMAQELA
Eyona Imisitho Yamaqela Ngubani oBhatala iBachelor okanye iBachelorette Party?
Ngubani oBhatala iBachelor okanye iBachelorette Party?
Nantsi indlela yokusondela kumxholo wabakhwenyana kunye nabayeni. Imifanekiso kaGetty
Ukuhlaziywa ngoMeyi 18, 2021 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Ngelixa iindwendwe ezichongiweyo ziya kuhlawula iminyhadala yangaphambi komtshato njengepati lokuzibandakanya okanye ishawa yomtshato , Ngubani ohlawula iindleko zeqela le-bachelorette okanye iindleko zepati ye-bachelor? Ngaba kukho indlela yokuziphatha ethile yoxanduva lwezezimali kwezi ziganeko, kwaye ulawula njani ngokuchanekileyo iindleko ze-bachelor okanye ze-bachelorette party?
Ngokungafaniyo neshawa, apho umbuki zindwendwe ahlawulela lo msitho (uhlala elilungu losapho okanye amalungu omtshato), bonke abazimase iqela le-bach baya kungena ngaphakathi kwaye baphathe uhambo lwabo. Yenze icace phambi kwemithendeleko nangona. Xelela zonke iindwendwe ukuba sithini isicwangciso kunye negalelo eliphakanyisiweyo. Apha, uya kufumana iinkcukacha ngakumbi ukuba ngubani ohlawula i-bachelor kunye ne-bachelorette party party, kunye nendlela yokulawula imali ngeli xesha lokubaleka.
Ngubani ohlawulela iindleko zeBachelor kunye neBachelorette Party?
Ngokwedatha yethu yangaphakathi evela kwi-2019 (pre-COVID), indleko zepati ye-bachelorette ixhomekeke kwizinto ezinje ngobude bomnyhadala, iindlela zothutho, ukuhlala kunye nemisebenzi. A iqela le-bachelorette , ke, inokubakho naphi na ukusuka kwi- $ 350 yokuthandana yosuku olunye ukuya kuthi ga kwi-4,000 yeedola kwi indawo ekuya kuyo iqela lokuhlala uhambo. Kwelinye icala, i-median yeqela le-bachelor liphezulu kakhulu, ukuqala nge-550 yeedola, kwaye inyuka ngokwemiba efanayo.
Nge-bachelorette kunye ne-bachelor party etiquette, ohlawula ngokuthe ngqo: bonke abazimeleyo banoxanduva lweendleko zeqela, kubandakanya izidlo kunye nezinto ezongezelelweyo eziqaqambileyo 'kwimisitho' yomyeni okanye yomtshakazi. Iindleko zomyeni okanye zomtshakazi zihlala zigutyungelwe, nangona oku kuxhomekeke kwakhona kuhlobo lwepati: ngaba yindawo ekuya kuyo i-bachelorette impelaveki okanye isiganeko sobusuku obunye?
Kwipati ye-bachelor, eyona ndoda ibalaseleyo ihlawulisa intloko nganye ngeziselo kunye nokuzonwabisa. Kumthendeleko we-bachelorette, isicakakazi okanye u-matron wodumo (uhlala engumhlobo osenyongweni womfazi oza kuba), okanye othathe inxaxheba kwezemali phakathi kwabakhwenyana, baya kukhokela kuhlahlo-lwabiwo mali, iindleko kunye neentlawulo zomntu ngamnye. Uxanduva lwezezimali, ke ngoko, luwela kuye wonke umntu obandakanyekayo, kodwa kukho umntu oyinqobo ukugcina iqela lisemgceni kwaye lithathe ithebhu.
Ulawula njani iBachelor kunye neBachelorette Party iindleko
Xa izimvo zepati ye-bachelor kunye ne-bachelorette iveliswa okokuqala, i-to---wed ichonga uluhlu lwezifiso iindawo zokuhamba , kunye nobude bexesha elicetywayo lomsitho. Emva koko, iqela lisebenza ngeeshedyuli ezinokwenzeka kunye nezithintelo kuhlahlo-lwabiwo mali. 'Ukuba [ungumtshakazi okanye umyeni], yenza le ncoko nabantu abaceba umsitho wakho womtshato kwaye ufumane umbono othembekileyo wento abantu abazimiseleyo ngayo-okanye abanako-okanye abanakho-ukufikelela kuyo,' utsho UKathleen Entwistle UMlawuli oLawulayo eMorgan Stanley kuLawulo lwaBucala lwaBucala. Kungumcimbi wokuqonda izinto eziphambili ngokubaluleka kwaye yintoni ebalulekileyo kuwe, kwaye ulungelelanise oko nabantu ofuna ukungqongwa nabo. '
Nantsi kanye indlela yokulawula inyathelo ngalinye lokubaleka kwindawo ye-bachelor okanye iqela elifanelekileyo le-bachelorette.
Ukuseka isicwangciso 'seBach'
Lo mntu kufanele ukuba azilungiselele, abe noxanduva kwaye abe nolwazi lokufunda ngokwasezimalini kuba uzakube elawula zonke iindleko ezophulwayo ngokweqela. Umbuzo oqhelekileyo esiwufumanayo ngowokuba oyena mntu ulungileyo okanye isicakakazi sembeko sihlawula iindleko zebach bash? Akunjalo. Rhoqo, lo mntu uphambili womtshato uya kuba noxanduva lokutyhala ishedyuli kunye okanye ukubeka ikhadi labo kwindawo ekhuselekileyo.
Ukusuka kwindawo yoxanduva, ndingacebisa umntu omnye ukuba abe ngumgcini webhajethi; Ngokwesiqhelo isicakakazi sembeko okanye umntu othile kwitheko lomtshato, 'ucacisa u-Entwistle. 'Lo ngumntu oququzelelweyo kwaye onokuqonda okuthile kohlahlo-lwabiwo mali nakwizimali. Chonga loo mntu mnye oza kukhathalela onke amalungiselelo kunye neenkonzo ozibhukishileyo. '
Nciphisa uhlahlo-lwabiwo mali
Ngelixa bonke abazimeleyo behlawulela i-bachelorette okanye iqela le-bachelor, inkcitho iyonke inokuxhomekeka kwinani labo bakhoyo. Amaqela e-Bachelorette ahlala ene-avareji ye-10, ngelixa amaqela e-bachelor enabathathi-nxaxheba abamalunga nesibhozo ngokweedatha yethu ye-2019. Inani labantu abahamba ipati liyanceda ukunciphisa kunye nokwahlula iindleko.
Gcina ukhumbula amanani angasemva kwe-bach bash nawo ahambelana nokuhamba. Phantse umntu omnye kwabane kwitheko lesidanga sokundwendwela ubhabha besiya kwiindawo zabo ngokuchasene nomnye kwabahambi besihlanu be-bachelorette. Uya kufuna uluvo ngokubanzi lokuba bangakanani abantu abazimeleyo abazimisele ukuchitha imali yokubaleka kwaye kubalulekile kwimihla yeendawo kunye neendawo ezikuzo kuluhlu lomntu wonke.
Qinisekisa uMbono kunye neMihla
Idatha yethu ifumanise ukuba iipesenti ezingama-27 zabazakube bethathe isigqibo kwindawo ekuyiwa kuyo, ngelixa enye i-22% yabo bonke ababekho kwiqela (kunye nomtshakazi okanye umyeni) bathathe isigqibo ngokudibeneyo. (Ngamanye amaxesha, iipesenti ezingama-21 zabantu abahamba ipati bamangalisile undwendwe oluhloniphekileyo ngokukhetha indawo.) Ekugqibeleni, isiqinisekiso siyadingeka, nokuba ngumtshakazi okanye umyeni ngokuzikhethela ngokuthe ngqo indawo abaya kuyo, okanye iqela elifikelela kwisivumelwano kunye.
Ngamaqela amnandi kakhulu e-bach, umtshakazi uhlawula amava athile okanye umyeni athathe amanyathelo okufihla indawo yokuhlala ukubonisa ukubonga kwabo bonke abantu. Ukuba umtshakazi okanye umyeni unabahlobo abangakwaziyo ukuthatha inxaxheba kwiqela le-bach ngenxa yokuba bebhabha okanye behlala kwiihotele, abaza kutshata kufuneka benze isigqibo. Nokuba batshintshe umbono wabo okanye bamkele ukuba abanye abakwazi ukuya, utshilo u-Entwistle. 'Okanye-bazinikela ukuxhasa ezinye zeendleko zebach party ukuba ingaphezulu kwaye ingaphaya komtshato onokukwazi ukufikelela kuwo. Nika abantu ezo ndlela. Kukuqonda ukuba yintoni ebalulekileyo kumtshakazi okanye umyeni kwaye uyilungelelanise nepokotho. '
Nje ukuba kusekwe uhlahlo-lwabiwo mali, iqela liya kusebenza ngemihla ephambili. Ngokwedatha yethu, uninzi lwamaqela e-bachelorette ayenzeka entwasahlobo nasehlotyeni (iipesenti ezingama-43 kunye ne-35%, ngokwahlukeneyo), amanani-manani ahambelana nexesha lomtshato eliphakamileyo. Ngokuvavanya umfanekiso wonke, ekufuneka uyenzile ngexesha lokucwangciswa komtshato, kuya kulindelwa ulindelo olufanelekileyo.
Bhukisha ukuhlala kwakho
Ngokwedatha yethu yangaphakathi, imisebenzi ephezulu ngexesha le-bachelor okanye iqela le-bachelorette libandakanya uhlobo oluthile lomsebenzi onxulumene nokusela. Malunga ne-47% yabo bonke abaphendulayo kwi-2019 bathi bayokutya isidlo sangokuhlwa kunye neziselo, ngelixa enye i-35% isithi bayayibetha iklabhu. Ukutsiba kwebha kunye nokugaqa kwebha yenye into eyaziwayo (iipesenti ezingama-32), ngelixa iipesenti ezingama-26 zebheshi zibandakanya ibhasi yepati.
Abathathi-nxaxheba beBachelor bachitha ngaphezulu benikwa iintlobo zemisebenzi, kubandakanya igalufa, ukubetha iikhasino (22%), kunye nokugcina iminyhadala yezemidlalo.
Ukuhonjiswa kokuthenga, iZipho kunye neSwag
Ngubani ohlawulela imidlalo yepati ye-bachelorette, loo mijelo kunye nokuhombisa? Idatha yethu ifumene amaqela e-bachelorette kunokwenzeka ukuba abandakanye ukuhonjiswa kunye nokunxiba kwiindleko kunamaqela e-bachelor. Rhoqo, iqela liphela liza kungena ngaphakathi kwaye isicakakazi sembeko siya kukhokela ekukhetheni iindlela zokonwabisa ezihonjisiweyo. Ukuthandwa kweqela bekuhlala kukhethwa, kodwa indlela emnandi yokongeza umbulelo kumava.
Ukwengeza, izipho ezivela kwiqela Kukwabanjelwa inkcitho iyonke, kubandakanya iimpahla zangaphantsi kunye nezipho zamaqela e-bachelorette okanye izipho zomtshato weqela. Utywala kunye nezinto zekhaya zazisoloko ziboniswa kumatheko e-bachelor.
Gcina Zonke Iindleko
Ukulungelelanisa iindleko ezongezelelweyo zoluhlu lweendwendwe, elinye ukuya kwamalungu amabini omtshato abekiweyo (uhlala enguMntu oBalaseleyo okanye i-MOH) aya kugcina zonke iindleko. Oku kuthetha ukubeka phantsi amakhadi ngokujikeleza okanye ukuba 'ne-bach party accountant' icinezele iindleko zokuqala, kubandakanya ii-cocktails, izidlo ezinje ngebrunch, Ubers nangaphaya.
Ukwenza lonke iqela le-bachelorette linamava amancinci kancinci: senze uluhlu lweeapps ezifanelekileyo zokukhuphela, kubandakanya ukhetho lokwahlula iindleko kunye neendlela ezizezinye zokucwangcisa iqela.
iinwele zeendwendwe zomtshato ngeenwele eziphakathi
Isiqithi sase rustic
kunye nobukhulu besibini ilokhwe yomtshato
Yimalini idayimani ye-8 yekarati
xa uthandana ucaphula